All Articles - Page5of 37 - Shop
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ 2020 11.11ပွဲတော်ကြီးကို Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ0724
The KaungHtet November 3, 2020 11:38 am December 10, 2020
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေ၊ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ Shop Anniversary ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ 2020 Shop Anniversary ပွဲတော်ကြီးနဲ့ 9.9 Super Sale ပွဲတော်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုဟာမကြာမှီရောက်ရှိလို့လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး Online …
Get your buying guides for 12.12 The World’s Biggest Sale 20200759
The KaungHtet October 23, 2020 9:14 am December 10, 2020
12.12 sale 2020 hasalot of products, so did you already put your favorites to Wishlist? If you have not …
What is the easiest way to get discount coupons in 12.12 the World’s Biggest Sale 2020?0671
The KaungHtet October 23, 2020 9:10 am December 10, 2020
In the coming 12.12 2020 World’s Biggest Sale, it includesalot of events to get more Shop 12.12 deal …
Others, Shop Event
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဘာဝယ်ရမလဲမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် စျေးဝယ်လမ်းညွှန်0798
The KaungHtet October 23, 2020 9:09 am December 10, 2020
12.12 sale 2020 စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ဘာတွေဝယ်ယူချင်လဲဆိုတာကိုရော သင့်ရဲ့ Wishlist ထဲမှာထည့်ထားပြီးပြီလား? မထည့်ထားရသေးဖူးဆိုရင်တော့ စျေးပွဲတော်နေ့ကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ မြန်မြန်တော့ထည့်ထားမှရမယ်နော်။ ဒါမှ မိမိဝယ်ယူချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ လျှော့စျေးတွေကို သိရှိနိုင်မှာပါ။ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အတွက် …
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ?0695
The KaungHtet October 23, 2020 9:03 am December 10, 2020
လာမည့် 12-12 sale 2020 ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင် ၉.၉၊၁၀.၁၀ စျေးရောင်းပွဲတွေကလိုပဲ လျှော့စျေးကူပွန်တွေရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ကောင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ကတော့ လျှော့စျေးကူပွန်တွေရှိတာသိပေမယ့် ဘယ်လိုရယူရမလဲ ဆိုတာမသိလိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးအတွက်လျှော့စျေးကူပွန်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ …
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ?01304
The KaungHtet October 23, 2020 8:52 am December 10, 2020
၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပလာခဲ့တာဆိုရင် ဒီနှစ်မှာတော့ သုံးကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ 12 12 sale 2020 စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကတော့ နိုဝင်ဘာလ …
What is 12.12 The World’s Biggest Sale 2020?0651
The KaungHtet October 23, 2020 8:49 am December 10, 2020
In November 2020, Shop will hold the largest and most incredible sale in the world. It is 12.12 shopping festival …
What should you buy in 11.11 Biggest Sale 2020?0556
The KaungHtet October 23, 2020 8:46 am November 3, 2020
Shop MM is hosting the biggest, most incredible 11 11 Sale 2020 will hold in November 2020. 11th November is …
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲကြီးမှာဘာတွေဝယ်သင့်လဲ?0711
The KaungHtet October 23, 2020 8:45 am November 3, 2020
11.11 shopping festival နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Single dayအဖြစ်လူသိများကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး online shopping …
Shop bring back the world’s biggest sale 11.11 to Myanmar0424
The KaungHtet October 14, 2020 1:03 pm October 21, 2020
A leading local E-commerce platform Shop.com.mm already held Shop 6th Anniversary with unbelievable prices and discounts. After finishing the Shop …